Dabeylaha ku dhuftay waqooyiga America iyo sida ay u saameeyeen Soomaalida – XOGMAAL.COM
Dabeylaha ku dhuftay waqooyiga America iyo sida ay u saameeyeen Soomaalida
Lama arag dabeylahan tobonaankii sano ee u dambeeyay waxeyna sababeen inay waxyeelo ka soo gaarto ku dhawaad 30 qof halka kumanaan kalena ay ka barakaceen guryahoodii dabeysa awgeed.
By Soomaaliya	 On Sep 25, 2018
Wararka ka imaanaya America ayaa sheegaya in dabeylo xoogan oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedba ay ku dhufteen Ottawa oo k a tirsan Canada.
Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa laga soo xigtay saameynta ka dhalatay dableylahaasi ayaa sababay in dad badan oo ay ku jiraan qoysas Soomaaliyeed ay guryahooda ka barakacaan, kuwaasi ilaa hadda ku sugan xarumo la dejiyay oo ku meel gaar ah.
Sheekh C/raxmaan Bashiir ayaa syiri “Annaga guryihii waa nagala saaray, mana geli karno oo kuma laaban karno, qof walba wuxuu u tagay qofkii saaxiibkiisa ahaa, korontada ayaa go’day dhibaatada ma yara, dad 30 qof gaaraya ayay waxyeelo ka soo gaartay”.
Dableylaha Ottawa waxay sababeen in korontada ay maalmo ka maqnaato Boqolaal Kun oo guri, taasi oo ah mid ay ku tiirsan yihiin nolosha dadka.
Dadka waxay ku tilmaameen mid musiibo ah oo aanay horey u arag, waxayna tilmaameen inay dareemeen cabsi badan, waxaa la filayaa in dadka ay ku sii nagaadaan goobaha la dajiyay ilaa xaalada ay ku soo noqoto sidii hore.
Daawo: Madaxweyne Farmaajo maxey uga dhigan tahay Guushii Degmada Waaberi?
Sharci cabsi ku abuuray soo galootiga oo Talyaaniga uu meel mariyay